व्यावसायिक जीवनमा प्राय: सोचेजस्तो नहुन सक्छ। यस्तो घटना र क्षणहरूले पनि निरुत्साहित बनाउन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूको जीवनमा बनेका बायोपिक र फिल्महरूले व्यवसायमा लागिराख्नको लागि ठुलो प्रेरणा र हौसला मिल्छ। यस्ता फिल्महरूमा कस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भनेर राम्ररी चित्रण गरिएको हुन्छ। उनीहरूले गरेका राम्रा कामबाट सिक्ने तथा गरेका गल्तीहरू नदोहोर्‍याउने सचेत पनि हुन सक्छन्। यो लेखमा हामीले व्यवसायीहरूले हेर्नैपर्ने केही फिल्महरूको सूची तयार पारेका छौँ।
१.द सोसल नेटवर्क
डेभिड फिन्चरद्वारा निर्देशित सोसल नेटवर्कमा मार्क जुकरबर्गले हार्वर्डमा अध्ययन गर्ने क्रममा फेसबुक कसरी बनाए भनेर देखाइएको छ। फिल्ममा जुकरबर्गलाई अन्य साथीको ‘आइडिया’ प्रयोग गरेर फेसबुकको स्थापना गरेको भनेर आरोप खेप्नु परेको थियो। जुकरबर्ग आइडिया चोरीको आरोपबाट कसरी मुक्त भए भनेर फिल्म हेरेर सजिलै जान्न सकिन्छ। यस फिल्ममा सबै ठुला कम्पनीहरू सुरुवात प्राय: सानो नै हुन्छ भन्ने देखाइएको छ।
२. रकेट सिंह
शिमित अमिनद्वारा निर्देशित रकेट सिंहमा रणविर कपुरले हर्पित सिंहको अभिनय गरेका छन्। यस फिल्ममा कम्प्युटर बिक्रेताका रूपमा हर्पित कार्यरत छन्। आफू कार्यरत कम्पनीमा कामको सम्मान नभएकाले उनले अन्य ४ जना कामदारसँग प्रतिद्वन्द्वी कम्पनी स्थापना गर्छन्। ऊनी एक सामान्य कर्मचारीबाट व्यवसायी बन्छन्। यस फिल्ममा कलेजमा कमजोर हर्पित व्यावसायिक जीवनमा कसरी सफल भए भनेर देखाइएको छ। रकेट सिंहले सिकाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको शैक्षिक सफलता नहुँदा पनि व्यावसायिक जीवनमा दृढताका साथ काम गरेमा सफल भइन्छ भन्ने हो।
३. परसुइट अफ ह्यापिनेस
गेब्रिएल मुकिनोद्वारा निर्देशित द परसुइट अफ ह्यापिनेसमा अमेरिकाका उद्यमी क्रिस गार्डनरको जीवनको सङ्घर्ष देखाइएको छ। विल स्मिथले क्रिस गार्डनरको भूमिका निर्वाह गरेको उक्त फिल्ममा क्रिस गार्डनर स्टकब्रोकरमा सामान्य इन्टर्नदेखि करोडपति कसरी भए भनेर देखाइएको छ। फिल्ममा उद्यमीहरूले सुरुवाती चरणमा सामना गर्नु पर्ने परिस्थितिहरूको चित्रण गरिएको छ। साथै यस फिल्ममा क्रिस गार्डनर पारिवारिक समस्या बाबजुद व्यावसायिक जीवनमा कसरी सफल भए भनेर सजिलै अनुभूत गर्न सकिन्छ।
४. द फाउन्डर
जोन ली ह्यान्ककद्वारा निर्देशित फिल्म द फाउन्डरमा दुई दाजुभाइ रिचर्ड र मौरिस म्याकडोनाल्डले स्थापना गरेको म्याकडोनाल्ड फास्ट फुड चेनको कथा बताउँछ। म्याकडोनाल्ड दाजुभाइले विस्तार गर्न नसकेको व्यवसाय रे क्रोकले किनेर कसरी विभिन्न ठाउँहरूमा फ्रान्चाईसहरू खोले भनेर उक्त फिल्ममा देखाइएको छ। फिल्मबाट म्याकडोनाल्ड विश्वको एउटा उत्कृष्ट बर्गर स्ट्यान्ड कसरी भयो भनेर सजिलै जान्न सकिन्छ। उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सामान बेच्ने हो भने सजिलै लोकप्रिय हुन्छ भन्ने नै फिल्मबाट पाउने मूल शिक्षा हो। साथै फिल्मबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न मानिसहरूसँग गरिने साझेदारी र कन्ट्रयाक्ट बारे राम्रो चित्रण गरिएको छ।
मनी रत्नमद्वारा निर्देशित गुरु फिल्मलाई धीरुभाई अम्बानीको जीवनमा आधारित फिल्म पनि मानिन्छ। यस फिल्ममा अविशेक बचनले गुरुकान्त देसाइको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। गुरुकान्त देसाइले दाइजोबाट आएको पैसाले आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य कसरी खडा गरे भनेर देखाइएको छ। साथै अत्यादिक नाफा कमाउनका लागि अवैध रूपमा सामानहरू उत्पादन गर्दा कसरी पतन भइन्छ भनेर पनि देखाइएको छ। व्यापारको नैतिकता साथै व्यवसायीहरूलाई लगनशील, महत्वाकांक्षी र प्रतिबद्धता हुन गुरु फिल्मले सिकाउँछ।
व्यवसायसँग सम्बन्धित फिल्म साथै बायोपिकहरूले व्यावसायिक जीवनमा घट्ने विभिन्न घटनाहरू अनुभूत गर्न मद्दत गर्छ। निरुत्साहित भएको बेलामा फिल्महरूबाट मनोरञ्जन मात्र नभएर प्रेरणा पनि लिन सकिन्छ।त्यसैले फिल्महरूलाई समय र पैसाको बरबाद हुने माध्यम मात्र नभएर शिक्षा साथै प्रेरणाको श्रोतको रूपमा हेर्न जरुरी छ।